महावीरको महासपना - राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र (बिशेष कभरेज) - Living with ICT
Home / Featured / महावीरको महासपना – राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र (बिशेष कभरेज)
महावीरको महासपना – राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र (बिशेष कभरेज)
Admin Nov 28, 2016	Leaveacomment
नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ‘महावीर पुन’ प्रेरणादायी नाम हो । अमेरिका स्नातकोत्तर तहको पढाई सकी नेपालमा आएका उनी निरन्तर २४ वर्षदेखि सामाजिक सेवामा क्रियाशील छन् ।
यो अवधिमा एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा ग्रँमीण क्षेत्रमा विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने, हेल्थपोस्ट नभएको ठाउमा सामुदायिक क्लिनक सञ्चालन गर्ने, गाउहरुमा आयआर्जनका काम सुरु गर्ने, ट्रेकिगं रुट सञ्चालन गर्नेका साथै वायरलेसका सञ्जाल बनाएर गाउगाउमा इन्टरनेट पुर्याउने र इन्टरनेट प्रयोग गरेर ग्रामीण क्ष्ँेत्रका बासिन्दाहरुलई सूचना प्रविधिसग परिचित गराउने काम उनले गरे ।
यी यस्ता कामले नै उनलाई एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे अवार्ड दिलायो । दर्जनौ अन्तरास्ट्रिय सम्मान पाएका पुनको सक्रियतामा सुरु भैरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा यो लेख केन्द्रित छ ।
हाम्रा अमूल्य सृजनशील, प्रतिभाशाली, दक्ष तथा अदक्ष मानव शक्ति नेपालको लागि होइन कि अन्य मुलुकको विकास गर्न भरपुर रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । देश विकासको लागि अपरिहार्य यस्ता मानव संशाधन गुमाउनु भनेको कुनै पनि देशको लागि ठुलो क्षति हो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सपना
‘२० वर्ष नेपालका गाउगाउमा काम गरिसकेपछि मैले धेरै कुरा सिक्न सके । जापान, कोरिया, इजरायल, मलेसियाजस्ता देशहरु कसरी छोटो समयमै विकसित बन्न सके र नेपाल किन सकेन भन्ने कारण थाहा पाए । सरकारले कर्मठ र जुझारु जनशक्तिको प्रयोग गरी नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्ष्ँेत्रमा निकै काम गर्न सकिने सम्भावना थियो । यसैकारण मैले केही साथीहरुसग मिलेर राष्टिय आविष्कार केन्द्र ४ वर्षपहिले खोले,’ उनले भने ।
केन्द्र स्थापनाको प्रसंगबारे महाविर भन्छन्, ‘हाम्रा अमूल्य सृजनशील, प्रतिभाशाली, दक्ष तथा अदक्ष मानव शक्ति नेपालको लागि होइन कि अन्य मुलुकको विकास गर्न भरपुर रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । देश विकासको लागि अपरिहार्य यस्ता मानव संशाधन गुमाउनु भनेको कुनै पनि देशको लागि ठुलो क्षति हो ।
नेपालमा रहेका र विश्वको कुना कुनामा छरिएर रहेका युवा प्रतिभाहरूलाई यथोचित साधन श्रोत र जनशक्ति सहितको उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रलाई आवश्यक पर्नै प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्य राखेर नै राष्टिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ बिगतका दिनहरुमा बाध्य भएर बिदेशमा जानु भएका र हाल संसारका विभिन्न बिकसित देशहरुमा बैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, आविष्कारक, प्राध्यापक जस्ता प्रतिष्ठित काम गरि रहनु भएका नेपालीहरुलाई नेपालको लागि पनि काम गर्न अनुरोध गर्ने र त्यसको लागी उक्त अनुसन्धान केन्द्रमार्फत उनीहरुलाई छोटो समय अथवा लामो समयको लागि नेपाल फर्किने वातावरण तयार पार्ने सोच उनको छ ।
उनले नेपालमै सकेसम्मका वैज्ञानिक आविष्कार तथा प्रविधि विकास गर्ने कामलाई उच्च र विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्न, नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई अधिकतम प्रोत्साहन दिनेलगायतका उद्देश्य राखेका छन् ।
मैले सरकारलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ४० करोड रुपैया सम्मको अनुदान अथवा ऋण को लागी तीन बर्ष सम्म अनुरोध गरे कै हो तर उनीहरुले केहि मदत गरेनन् ।’
सुरुवाती लक्ष्य जलविद्युत आयोजना
राष्टिय आविष्कार केन्द्रको सुरुवाती लक्ष्य रु. ५० करोड हो, जसबाट १० देखी १५ मेगावाट सम्मको जल बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो जल विद्युतबाट आएको आम्दानीले आविष्कार केन्द्रलाई दिगो रुपमा संचालन गर्ने योजना रहेको महावीर पुन बताउछन् । पुनले यसका लागि सरकारसग बारम्बार आयोजना निर्माणको प्रस्ताव लिएर गएका थिए ।
आफ्नो प्रस्ताव बारे पुन थप भन्छन्, ‘उक्त आविष्कार केन्द्रलाई दिर्घकालिन रुपमा दिगो बनाउने र त्यसले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकोस भन्नको लागी १० मेघावाटको एउटा ‘हाइड्रोपावर’ स्टेशन बनाउने र त्यसबाट आएको आम्दानीले उक्त केन्द्र संचालन गर्ने भन्ने थियो । त्यसैको लागी भनेर मैले सरकारलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ४० करोड रुपैया सम्मको अनुदान अथवा ऋण को लागी तीन बर्ष सम्म अनुरोध गरे कै हो तर उनीहरुले केहि मदत गरेनन् ।’
यस्तो योजना सहयोग गर्नेले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै पुनले भनेका छन्, ‘यस्तो अनुदान अथवा ऋण दिन नमिल्ने अथवा गाह्रो हुने’ भन्ने थियो। सोही व्यहोराको अनुरोध मैले गैर आवाशीय नेपाली साथीलाई पनि बारम्बार गरेको हो । उहँहरुको पनि यसमा चासो भएको छैन ।’
५० करोड संकलन गरेर आविष्कार केन्द्रमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने उनको सपना छ । उनले यो केन्द्र विज्ञान, प्रविधिसंग मात्रै केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, जलविद्युतसहित नेपालमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनमा केन्द्रित बताएका छन् ।
के महाविरको एकल अभियान हो ?
देश विकासका लागि एउटा व्यक्तिको प्रयास मात्रै निरर्थक हुने महावीरको भनाई छ । ‘महावीरले अभियान सुरु गर्यो, अब उसैले देश विकास गर्ला नि भन्ने भनेर विकास हुने होइन र त्यो सम्भव पनि छैन,’ उनले भने । राष्टिय आविष्कार केन्द्रको यो अभियान आफूले मात्रै नभई टिमले सुरु गरेको उनी बताउछन् । भन्छन्, ‘अभियानलाई पुस गर्नेहरु हजारौं छन्, जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग बिना हामीले अघि सारेको महत्वाकाक्ष्ँी योजना पुरा हुन सक्दैन ।’ सरकारी दैलोमा धाउदा पटकपटक आश्वासन बाहेक केही नपाएका पुनले जनताको सहयोगबाट केन्द्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो घोषणापछि उनको अभियानमा हातेमालो गर्ने सहयोगी मनहरु बढेका छन् । ५० करोड संकलन गरेर आविष्कार केन्द्रमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने उनको सपना छ । उनले यो केन्द्र विज्ञान, प्रविधिसंग मात्रै केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, जलविद्युतसहित नेपालमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनमा केन्द्रित बताएका छन् । अभियानमा साथ दिन अहिले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली जुटेका छन् । उनले पोखरामा आफ्नो नाममा रहेको २८ रोपनी जग्गा समेत आविष्कार केन्द्रलाई दान गरेका छन् । जग्गाको मुल्य हाल ३ करोड पर्ने जनाइएको छ ।
किन सरकारले सहयोग गर्न सकेन ?किन यो अभियानप्रति राज्य मौन रह्यो ?’ ४ वर्षदेखिका प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, योजना आयोग र उच्च तहका सम्बन्धित कर्मचारीले मलाई बारम्बार झुठो आवश्वासन मात्रै दिएको उनको गुनासो छ ।
राज्य र नेताबाट झुठो आश्वासन
सरकारले अरर्बौ रुपैया आर्थिक सहायता पहुचवाला व्यक्तिलाई बँडेकोप्रति गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । पुनले सरकारले बिगतका दुई वर्षमा विभिन्न पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थाहरु लाई २ अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता बाँडेकोको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । यत्ति ठूलो रकम बाडेँकोप्रति पुन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने बारेको प्रस्ताव के थियो र किन सरकारले सहयोग गर्न सकेन ?किन यो अभियानप्रति राज्य मौन रह्यो ?’ ४ वर्षदेखिका प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, योजना आयोग र उच्च तहका सम्बन्धित कर्मचारीले मलाई बारम्बार झुठो आवश्वासन मात्रै दिएको उनको गुनासो छ ।
अघिल्लो सरकारसग पनि आविष्कार केन्द्रका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ बारे एक शब्द पनि उल्लेख नगरेपछि पुन निराश भएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीले आफूले के गर्नुपर्ने गर्छु भने पनि पछि झुक्याएको पुनको आरोप छ । यद्यपि पौडेलले ५ करोड सहयोग दिन खोज्दा लिन नमानेको र ५० करोड तत्काल चाहिन्छ भन्ने महावीरको अडानले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १५ पृष्ठको प्रस्तावनमा पुनले ५० करोडको अतिरिक्त अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने डेढसय देखि २ सय रोपनी जग्गा देशका विभिन्न ठाउमा उपलब्ध गराउन पनि सहयोग मागेका थिए । यसका लागि सम्भव छ भने नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको पूर्व राजा विरेन्द्रको जग्गा (ट्रस्टमा हाल २२ हजार रोपनी जग्गा छ) केन्द्रका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरियोस् भन्ने पनि प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले सुनाए ।
अब सरकार र नेताहरूको मुख नताकी पुनले जनताकहाँ जाने र बजेट संकलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि उनले अनलाइन सहयोग फारम र घरदैलो अभियान चलाएका छन् । केन्द्रलाई प्राप्त सहयोग रकमबारे पारदर्शी ढंगले वेभसाइटमा राख्ने जनाएका छन् ।
अब जनताको दैलोमा
मान्छेको भविष्यवाणी गर्नेलाई एक करोड रुपैयँ दिने सरकारले मुलुकको विकास गर्ने व्यक्तिको भने सधैं उपेक्षा गर्दै आएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राज्यप्रति गुनासो गर्ने बढेका छन् । ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ स्थापना गर्ने अभियानमा छन् । त्यसका लागि उनले पटक–पटक सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूसग प्रस्ताव पनि राख्दै आए । तर, अहिलेसम्म उनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
अब सरकार र नेताहरूको मुख नताकी पुनले जनताकहाँ जाने र बजेट संकलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि उनले अनलाइन सहयोग फारम र घरदैलो अभियान चलाएका छन् । केन्द्रलाई प्राप्त सहयोग रकमबारे पारदर्शी ढंगले वेभसाइटमा राख्ने जनाएका छन् । यसैगरी उनले सहयोग गर्न इच्छुकलाई पैसामात्रै नभई इन्नोभेसन कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया पनि मागिरहेका छन् ।
आविष्कार केन्द्रको स्थापनापछि देशमै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुने र ३० वर्षमै नेपाललाई एउटा विकसित देश बनाउन सकिन्छ.भन्ने महत्वाकाक्ष्ँी योजना ल्याइएको छ ।
यसरी सञ्चालन हुनेछ आविष्कार केन्द्र
यो मुनाफा वितरण नगर्ने साझा संस्था हो जहा कसैको सेयर वा लगानी भन्ने हुदैन । संस्था दर्ता गरिएबमोजिम यसमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरर्स हुन्छ, जसमा रहनेहरुले तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिने छैनन् । अहिले महाविरसहित ५ जनाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स रहेको छ । विदेशमा भएका इन्नोभेसन सेन्टरहरुमा राज्यले लाखौं डलर प्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ ।
उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता इन्नोभेसन सेन्टरमा सरकारले नै पैसा भरिदिने भएकाले आर्थिक पाटोको केही समस्या हुदैन । तर, हाम्रो देशमा सरकारले इन्नोभेसन सेन्टर सुरु नगरेको अवस्थामा जनताको अग्रसरताबाट खोलिन लागेको छ ।’ विकसित देशमा रहेका इन्नोभेसन सेन्टरहरुमा ठूला युनिभर्सिटीहरु र इन्स्टिच्युटले ठूला ठूला रिसर्च गर्ने गर्छन् । तर हामीले सुरु गर्न लागेको इन्नोभेसन सेन्टर भनेको केटाकेटीलाई हुर्काउने नर्सरी जस्तै हुनेछ जसमा नया आइडिया भएका मानिसलाई सहयोग गरिन्छ । उनीहरुको आइडियालाई सफल बनाउन चाहिने आर्थिक, प्राविधिक वा जे जस्तो सहयो सहयो चाहिन्छ, त्यो यसले उपलब्ध गराउने र उनीहरुले निर्माण गरेको प्रोडक्टलाई इन्भेस्टर्ससग जोडेर मात्रै स्वतन्त्र छोडिदिने उनी बताउछन् ।
आविष्कार केन्द्रको स्थापनापछि देशमै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुने र ३० वर्षमै नेपाललाई एउटा विकसित देश बनाउन सकिन्छ.भन्ने महत्वाकाक्ष्ँी योजना ल्याइएको छ । यसले रोजीरोटीका लागि जागिर खोज्न नेपालीले विदेश धाउनु नपर्ने वा अपमानित भएर दोस्रो मुलुकमा दुःख पाउनुपर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नरहने उनी बताउछन् ।
सो अनुसन्धान केन्द्रमा र प्रस्तावित १० मेघावाटको जलविद्युत योजनामा आफू र आफूग काम गर्ने टिमका साथीहरुको कुनै व्यक्तिगत शेयर नहुने स्पष्ट पारेका उनले कालान्तरमा गएर उक्त अनुसन्धान केन्द्रपूर्ण रुपमा बिकसित भए पछि नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने संस्थाको विधानमा पनि उल्लेख छ ।
कालान्तरमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना
उनले आविष्कार केन्द्रका लागि अब सरकारी सहयोगको अपेक्षा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर सरकारले सहयोग गर्न चाहन्छ भने ढोका खुल्लै रहेको उनले बताएका छन् । भन्छन्, ‘मलाई जहासम्म लागेको छ, सरकार भोलीको दिनमा हामीलाई नै खोज्दै मद्धत गर्न आउछ । हालसम्म रहेका सरकार सधै रहन्नन । १०÷१५ वर्षमा अब नया पुस्ता आउछ, जुन बेग्लै वातावरणमा हुर्किएको छ ।
उनीहरुको सोचाई र काम गराई एकदमै फरक हुन्छ । उनीहरु सरकारमा आएपछि मैले अहिले सारेका कुराहरुलाई ज्यादै महत्व दिनेछन् ।’
महावीर पुन सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि यस्तै विकृतिहरु आइरहेको भन्दै यो नरोकिए माफियाविरुद्ध अनशन बस्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
मेडिकल क्ष्ँेत्रका विकृति विरुद्ध डा. गोविन्द केसीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । महावीर पुन सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि यस्तै विकृतिहरु आइरहेको भन्दै यो नरोकिए माफियाविरुद्ध अनशन बस्न सक्ने संकेत गरेका छन् । विशेष गरी सूचना र सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध उनको आन्दोलन लक्ष्ँित छ ।
प्राधिकरणको ग्रँमीण दूरसञ्चा विकास कोषको नाममा १२ अर्बभन्दा बढी रकम प्रयोगविहिन छ । अहिले उल्टै सरकारको अन्य खर्चमा यसको रकम प्रयोग हुन लागेकोमा पुनको आपत्ति छ । यसका साथमा अन्य ढिलासुस्ती र माफियाकरण विरुद्ध उनी आन्दोलनको मानसिकता बनाउदै छन् ।
महाबिर पुनको यो स्टोरी गत भदौ महिनाको ‘लिभिंग विथ आइसिटी’ म्यागजिनमा प्रकाशन भएको हो । म्यागजिन अनलाइनबाट अर्डर गर्न वा ग्राहक बन्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस : http://shop.livingwithict.com/ प्रस्तुति – शिब बस्नेत , तस्बिर स्रोत – अनलाइन, पुनको फेसबुक पेज र क्यामेरा पर्सन – बिशाल राइ ।
Initiation of mahabir pun mahabir pun Nation Innovation center 2016-11-28
Previous सामसुङ र क्वालकमकोबीचमा साझेदारी
Next पाेखरामा एसइअाे सेमिनार, विद्यार्थीले सिके वेबसाइट प्रमाेशन गर्ने तरिका